Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo dhici doonta 30 April - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDoorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo dhici doonta 30 April
April 22, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Baarlamaanka Soomaaliya. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhici doonta 30 April, sida maanta oo Axad ah ay bayaan ku sheegeen guddiga qabanqaabada doorashada.
Musharixiin badan ayaa tartamaya, oo uu ku jiro Wasiirka Gaashaandhiga Mursal Shiikh Cabdiraxmaan.
Musharax walba oo katirsan golaha wasiirada kaasoo u tartamaya guddoomiyaha baarlamaanka waa in uu iscasilaa kahor inta uusan isdiiwaangelin, guddiga ayaa sidaa sheegay.
Horaantii bishaan, guddoomiyihii hore Maxamed Shiikh Cumaan Jawaari ayaa iscasilay kadib dhowr asbuuc oo ismari-waa siyaasadeed ah oo u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
April 24, 2018 Wasiirka Gaashaandhiga dowladda federaalka Soomaaliya oo xilkii iska casilay si uu ugu tartamo guddoomiyaha baarlamaanka
May 1, 2018 Wasiirkii hore ee gaashaandhiga oo loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya
Somalia’s parliament speaker election to take place on April 30
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya oo sheegay in dalku uu ku guuleysanayo kalsoonida haayadaha maaliyadeed ee caalamiga ah iyo cafiska deynta
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Puntland Maxamuud Muuse Xirsi oo loo yaqaan Cade ayaa ku geeriyooday magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, sida ay xaqiijiyeen xubno katirsan qoyskiisa. Cade Muuse ayaa sanadkii 2006-dii ilaa [...]